Ungachinja sei default font muMapeji | Ndinobva mac
Ungachinja sei default font muMapeji
Kana iwe uri zvishoma werudzi rwefonti freak paunenge uchinyora gwaro muMapeji, unogona kusada iyo default font. Zvinoitika kwandiri, zvakanyanyisa, uye zvinoenderana nezvamunenge muchinyora, zviri nani kuzvichinja.
Kana iwe uchida fonti yakatarwa uye uchiishandisa nguva dzose, unogona kuita kuti ibude nekukasira pese paunogadzira gwaro nyowani. Kuchinja kuri nyore kwazvo.
Iyo default font inouya nekumisikidza mune macOS izwi processor, Mapeji, ndeye Helvetica Neue 11 poindi. Kana iwe usingaifarire, unogona kuichinjira kune imwe kuburikidza ne "Fomati" pani iyo iwe unayo kurudyi kwegwaro rauri kugadzirisa.
Kana iwe ukaichinjira imwe uye urikushandisa iyo, iyo nguva yaunovhura gwaro nyowani, Helvetica inoonekwa zvekare nekutadza. Izvi zvinogona kugadziriswa zviri nyore kuitira kuti nesystem, basa idzva ratotanga ne font yaunoshandisa zvakanyanya.
Pano unogona kusarudza default font muMapeji
Ungachinja sei default font muMapeji eMac
Kutanga vhura iyo Mapeji app. Ipapo:
Dzvanya pa Pages, mune yepamusoro menyu bar.
Sarudza zvaunofarira (Unogona kuenda zvakananga nemakiyi «Raira» + «,»)
Muhwindo iro rinomuka, Kazhinji, Sarudza "Default font"
Iwindo idzva richaonekwa. Pano unogona kusarudza font yaunoda zvakanyanya, uye saizi yayo font. Dzvanya kubvuma.
Iwe uchaona iyo nyowani nyowani yakasarudzwa mubhokisi rekutarisa.
Tora kubvisa zvido uye ndizvozvo
Kubva pano, Nguva dzese iwe paunovhura gwaro muMapeji, iyi font ichangobva kusarudzwa ichave iri yekushomeka. Ehezve, iwe unogona kushandura iyo default font kudzokera kune imwe chero nguva. sarudza iyo yaunonyanya kushandisa mumagwaro ako, uye nekudaro unozviponesa kubva pakuichinja pese paunopinda Mapeji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Ungachinja sei default font muMapeji
Tinogona kubhadhara neApple Watch tisina iyo iPhone padyo?
Wedzera mapfupi paMac yako neXMenu